Shirkadda Somtel oo Magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay adeeg cusub (SAWIRRO) | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Shirkadda Somtel oo Magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay adeeg cusub (SAWIRRO)
Shirkadda Somtel oo Magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay adeeg cusub (SAWIRRO)
Shirkadda Isgaarsiinta Somtel ayaa maanta Magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay adeeg cusub, oo loogu magac-daray Muraadso, kaasoo uu ujeedkiisu yahay in loogu faa’iideeyo bulshada.
Adeegga Muraadso ayaa ka kooban laba xirmo oo kala gedisan, kuwaa oo kala ah (Xirmada koobaad oo ah in qofka uu nus dollar ‘$0.5’ ku shubto, siduu doonana uu ugu hadlo afar iyo labaatan saac iyo xirmada labaad oo ah adeeg toddobaadle ah, oo qofka inta uu saddex dollar ‘$3’ ku shubto uu siduu doono ugu sheekeeyo).
Xog uruurin la sameeyay ayaa lagu ogaaday in bulshada Soomaaliyeed ay adeegsato adeegga ku hadal oo keliya, kaasoo ay adag tahay in inta badan dadka ay si maalinle ahi ugu shubtaan, marka aad eegto qarashka kaga baxaya.
Bulshada Soomaaliyeed oo lagu tilmaamo bulsho hadasha ayaa iminka loo soo bandhigay adeegga Muraadso, oo macnihiisu yahay ‘Hadal oo ha daalin’, iyadoona ay si weyn uga faa’iideysan doonaan bulshada Soomaaliyeed, oo ay ugu horeeyaan kuwooda danyarta ah.
Madaxa Iibka ee Shirkadda Somtel, Cumar Maxamed Nuur oo ka hadlay madasha lagu soo bandhigay adeegga Muraadso ayaa ku dheeraaday ka hadalka ahmiyadda sooyaalka ee Somtel iyo sida ay shirkadda ugu nugushay inay bulshada ka haqabtirto inay hellaan adeeg rasmiya, oo baahidooda dabooli kara.
Axmed Ciise Xaaji Liibaan Fiqi, Madaxa Suuqgeynta ee Shirkadda Somtel oo sidoo kale goobta ka hadlay ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed, ay adeeggaan oo kale naawileysay muddo dheer. Waxa uu intaa ku daray in Somtel ay hadda bulshadeeda u daahfurtay wixii ay in muddo ahba ku taamayeen.
Gudoomiyaha Waaxda Ganacisga ee Somtel, Cabdullaahi Cali Caamir ayaa dhankiisa sheegay in adeegga Muraadso uu ka dhigan yahay ‘Hadal oo ha daalin’, dadka Soomaaliyeedna ay mahdin doonaan adeeggaan, marka ay u kuurgalaan isticmaalkiisa.
Dadkii kale ee ka qaybgalay munaasabadda daahfurka ee adeegga Muraadso oo qaybtood ka hadlay madashadaasi ayaa boggaadiyay adeegga ballaaran ee Somtel u hayso bulshoweynta Soomaaliyeed.
Shirkadda Somtel oo Magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay adeeg cusub (SAWIRRO) was last modified: July 17th, 2020 by Admin
Dhageyso Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa tababar ugu soo xirey magaalada Beledweyne ciidamo ka tirsan Hirshabeelle
RW Kheyre oo ka hadlay naf-hurnimada Shaqaalaha caafimaad ee ku howlan Xakameynta Covid-19
Akhriso:-Weerar Dabley hubeysan ku qaday Xarunta wasaarada Gaashaandhiga
Akhriso:-Wafdi Heer sare ah oo ka socda Eritrea oo si diirran loogu soo dhoweeyay Addis Ababa